Abavelisi be-LED abavelisi kunye nababoneleli - iTshayina yeeStrip factory
Ukuthengisa okuNcinci kweNtengiso yeXabiso leSoftware yokuLawula ukuKhanya okuKhanya ngokuManzi
Izibane ze-LED kwigumbi lokulala Imibala zibalulekile ekukhuleni kwengqondo yabantwana njengoko uphando lubonisa ukuba imibala idlala indima ebalulekileyo kwi-IQ yabantwana, i-EQ kunye nobuntu. Ukuhonjiswa kwegumbi ithiyori yengqondo ingqina ukuba imibala inefuthe elikhulu kuphuhliso lweemvakalelo zabantu. Imibala eyahlukeneyo inika abantu iimvakalelo ezahlukeneyo zengqondo kwaye baneziphumo ezahlukeneyo kwimpilo yabantu. Ukuhonjiswa kwedorm yoyila ukukhanya kombala wakho kwaye makukuzisele ukonwaba kunye nokunciphisa ukudinwa ...
UkuLondolozwa kwaMandla oMgangatho oPhezulu waMandla kunye nokuKhuselwa kokusiNgqongileyo okuKhanya ngokuKhanya okuKhanya ngokuManzi
Imitha emide ekhokelwe ngokukhanya kwe-Cozylady yasekhaya, eyokuqala kwimizi-mveliso ukufezekisa inkqubela kwezobuchwephesha kwimicu yokukhanya eyi-12v edlula i-15m, ilunge ngakumbi ukuhonjiswa kosapho. Iminyaka engama-20 yamava ephucukileyo kuyilo lweemveliso kunye nakwimveliso. Injongo yethu kukuyila izinto ezintsha kunye nomgangatho ophezulu. Iimveliso zethu zinenkqubo ezininzi zokuhlola ngaphambi kokushiya umzi-mveliso ukuze kuqinisekiswe imigangatho yokhuseleko kunye nokuzanelisa kunye nokuzithemba. Umtya wokukhanya weWifi okhethekileyo ...
Ifektri yokuThengisa ngokuthe ngqo kuMgangatho oPhakamileyo woSetyenziso lweeNkqubo zoLawulo lweSilawuli kude nakwiProfayile yokuKhanya okuKhanyayo okuKhokelwayo
Strip Umtya we-LED uza kuwa?】 Ngokwengxelo yabathengi, sisandula ukwenza uhlengahlengiso olubalulekileyo- uhlaziyo olunamathelayo lwe-thermal oluqhubayo. Njengoko ixesha lokusebenzisa lisonyuka, i-viscosity iyanda. Kodwa akukhathaleki nokuba incamathele kangakanani, isibane sokukhanya esingama-20m sidlula kubukhulu kunye nobunzima bezinto eziqhelekileyo, ke silungiselela ukuqiniswa kokufikelela ekusombululeni ingxaki yomtya wokukhanya we-LED owayo. Isithembiso sethu: Ukuba ufuna ezinye izinto ezongezelelekileyo zeteyiphu ze-3M, nceda unxibelelane nenkonzo yethu yabathengi. 【...
Ifektri yokuThengisa ngokuthe ngqo kuMgangatho oPhakamileyo ixhasa ukuLawulwa kweeFowuni eziMninzi zoLawulo lweBluetooth
Vumelanisa neMowudi yoMculo yoMculo omangalisayo, eyakhelwe-ngaphakathi kwimakrofoni ephezulu ebuthathaka, imibala itshintsha ngokuzenzekelayo isekwe kumculo womculo / kwisandi esijikelezileyo. Ukuqala ipati yomculo ngezi zilayiti. Inokudala imeko yothando, entle, enomdla, yomlingo kwiqela lakho. Oku kuyakwenza ukuba iqela lakho likhumbuleke. Yonwabela umboniso wepati kunye nezigidi zemibala. Ukusetyenziswa okubanzi Ezi zibane zokungenisa amanzi zenzelwe ukuhonjiswa ngaphakathi nangaphandle. Ingasetyenziswa ngokulula naphi na, ufumane ...
Ukuthengisa amaxabiso aPhezulu oPhuculo lweNkqubo yokuSebenzisa uLawulo olukuMandla okuKhanya kwezibane eziKhanyisiweyo
I-smareal 50FT / 15M i-LED Strip Lights izisa umthendeleko wakho obonakalayo Ubomi bufuna imo yesiko, izibane ezimibalabala zenza ubomi bakho buhle kwaye bunomdla. ungalitshintsha igumbi libe zizitayile ezahlukeneyo.Makhe uzintywilisele ngokushushu, kamnandi. Izibane ze-LED zilungele amakhitshi, amagumbi okulala, ukukhanya kweTV, iiholide, okanye iminyhadala yosapho. Sisipho esihle kusapho kunye nabahlobo bakho. Imemori kunye nexesha lomsebenzi we-strip yokukhanya kwe-LED inomsebenzi wokukhumbula, inokukhumbula imowudi oyibeke ngaphambili. Kunye ne-sma ...
Imveliso ekuMgangatho oPhakamileyo yoPhuculo lweeNkqubo zoMbane kuLawulo lweeNdawo eziMandla eziNgaphandle zoLawulo lweeLayini eziMandla
Izibane zeLight Led, ungalungelelanisa ukukhanya kwemigca ukuze uhambelane neendawo ezahlukeneyo, izibane eziLed zinomsebenzi wokukhumbula, xa zisetyenzisiwe kwakhona, ziyakhumbula imowudi yokugqibela ngaphandle kokusetha kwakhona, nge-App ye-smart, onokuba nakho umsebenzi wexesha, vula kwaye ucime ngexesha elimiselweyo, unokukhetha iiModyuli ezingama-28 ezinamandla, unokukhetha umbala owahlukileyo weMiboniso emininzi eFumanekayo, umtya weLed ungasetyenziselwa ukuhombisa igumbi lakho lokutyela, Igumbi lokulala, Igumbi eliphezulu, Iveranda, Co. ..
Ixabiso elifanelekileyo loMgangatho oLungileyo waMandla oLondolozo kunye noKhuselo lokusiNgqongileyo lweWifi Strip Light
Khanyisa zonke iikona ngokulula ukufikelela nokuba uphi na umzi wakho kunye nomtya wokukhanya ongu-32.8ft. Khanyisa amagumbi amaninzi kwindawo enye. Ungaze ufune ukuphutha ngezinto ozifunayo ebumnyameni. Imowudi yoPhuculo yoMculo Vumelanisa umtya wokukhanya we-Alexa yakho kunye nomculo wakho owuthandayo ukuze ube namava okuphulaphula. Phakamisa ipati ngemowudi yokuguqula amandla okanye ukuphucula umculo wakho othambileyo, opholileyo kwimowudi ezolileyo. Ukutya kwindawo eCozy Ambiance Ukuguquguquka okuphezulu kuyenza ibe yimpepho yokuseta ikona. Yiba nesidlo esikhulu kunye ...
Ixabiso elilungileyo loMgangatho woSetyenziso lwe-Intanethi oluPhuculweyo lokuKhanya okuKhanyayo okuKhanyayo
Ulawulo lweThathu yoLawulo: Lawula izibane zakho ze-smart smart nge-Govee Home app, isilawuli kude, okanye ibhokisi yolawulo. Inkqubo yasekhaya yaseGovee ikunika ukufikelela kwimibala engaphezu kwezigidi ezili-16, iindlela zemidlalo ezingama-64, kunye nezinye izinto. Imowudi yoMculo eyandisiweyo: Enkosi kwimakrofoni eyakhelwe-ngaphakathi, ethe-ethe kakhulu, unokuvumelanisa iintlobo ezahlukeneyo zomculo kwizibane zomculo ze-LED. Phakamisa amaqela akho ngemowudi eguqukayo okanye ukhululeke ngokulula ngemowudi ezolileyo. Ukwamkelwa kweMibala eSmart: Uphawu lokuchola umbala olu-smart luvumela ...
Ifektri yokuThengisa ngokuthe ngqo kuMgangatho oSebenzayo weSikhathi sokuSebenza kweziKhanyiso eziLungileyo
Ukutya kwi-Ambience eCozy 16.4 yeenyawo kulungele ukuhombisa ikhawuntari yakho yasekhitshini. Yitya isidlo esimnandi kunye newayini entle kwindawo yokuphumla. Gcoba igumbi lokulala ukuKhanya okuLungelelanisiweyo kunye nemibala emininzi yenza ukuba u-diy ngendlela othanda ngayo. Nciphisa ukukhanya kwaye usete umbala owuthandayo ngesilawuli kude okanye usetyenziso lwasekhaya iGovee. Lonwabele ixesha lakho ngokukhululekileyo. Ixesha lePhathi Vula umculo xa iqela lakho liqala. Danisa nabahlobo bakho ngeendlela ezinamandla okanye ezizolileyo kunye nemibala ekhanyayo ekhanyayo. Uncedo oluLuncedo lweLizwi: Amandla ...
Amaxabiso aPhezulu okuThengisa axhasa ukuXhaswa kweMfonomfono eLawulwa yiRgb Strip Light
Ukulawulwa kathathu: Thatha ulawulo lwezibane zakho ze-LED nge-app yasekhaya yaseGovee, irimothi, okanye ibhokisi yolawulo. Ngoqhagamshelo oluzinzileyo lweBluetooth, ungatshintsha imibala, ucime izibane / ucime, okanye uhlengahlengise ukukhanya ngaphakathi kuluhlu lwe-10m / 32.8ft. Khanyisa umculo wakho: I-mic eyakhelweyo, ethe-ethe ikuvumela ukuba uvumelanise izibane ze-LED kumculo wakho owuthandayo. Ukuba nepati yeveki? Jazz phezulu ngezibane ezitshintsha umbala ezidanisa isingqisho sayo nayiphi na ingoma. Yenza ngokwezifiso ukuKhanya kwakho: Ngemo ye-DIY, v ...
Ukuthengisa amaxabiso aPhezulu oPhakanyisiweyo oLondolozo lwaMandla kunye noKhuseleko lweNdalo esingqongileyo Izibane zeStrip Led
16.4ft Rgb Led Strip Light SMD: 5050 150 leds Colour: RGB 5050 DIY Length: 1 * 5meters / 1 * 16.4ft Waterproof: No SGS US Certification Upgrade 24 Key IR Remote Control Mini Mini Controller 24 keys IR remote Control distance: <8M ( Kufuneka ubambe isohlwayo kuMamkeli oMncinci ngaphandle kwezithintelo) Igalelo leAdaptha ekhuselekileyo ye-12V: Iziphumo ze-100-240V: DC12V / 2A UL kunye ne-FCC Certification 5050 Imibala yokusebenza kwe-DIY Umbala oguqula izibane zomtya ezikhokelwe ngohlobo olulodwa lwe-R / G / B, 5050 umbala we-DIY. Nini ...
Ixabiso elifanelekileyo loMgangatho oLondoloziweyo waMandla oMbane kunye nokuKhuselwa kokusiNgqongileyo okuKhanya ngokuKhanya okungamanzi
Yonke imveliso yethu yenzelwe liqela lethu lophuhliso kwaye sinemveliso yethu. Sijonge ukubonelela ngeemveliso ezisemgangathweni kunye namava amahle okuthenga kubathengi. Le RGB ye-LED Strip yimveliso yethu entsha, inenkqubo yokufaka iikhowudi eyahlukileyo. Iza kunye nemibala engama-4096 ye-DIY, amanqanaba angama-16 ukuqaqamba okulungelelanisiweyo kunye ne-6 yemowudi yokukhanya eguqukayo. Ngaphezu koko, imowudi yokulala, eyilwe kakuhle ngolu hlobo lwe-rgb, xa ucinezela iqhosha lemodi yokulala, ukukhanya kwe-turnto ukukhanya kwe-orenji onokunceda ...